त्यसै हैन जताततै बम पड्किँदा प्रहरीले टुलुटुलु हेरेको - Dainik Nepal
त्यसै हैन जताततै बम पड्किँदा प्रहरीले टुलुटुलु हेरेको
दैनिक नेपाल २०७४ मंसिर १९ गते ९:४६
यो चुनावले बम संस्कृतिलाई हाम्रो समाजमा निकै सामान्यीकरण बनाइदिएको छ । अर्थात जतापनि बम, सानो छुस्स पड्किए पनि बम । बम यस्तो चीज जस्तो भएको छ कि मानौं यो सामान्य खेलौना हो ।
चुनावको मुखमा जताततै भएका बिस्फोटले जनतालाई आतंकित गर्ने काम भइरहेको छ । काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन्, उनैले गृहमन्त्रालय पनि सम्हालिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री भोट माग्ने चटारोमा भइरहँदा देशका बिभिन्न जिल्लामा बिस्फोटका घटना भइरहेका छन् । यो चुनावले बम संस्कृतिलाई हाम्रो समाजमा निकै सामान्यीकरण बनाइदिएको छ । अर्थात जतापनि बम, सानो छुस्स पड्किए पनि बम । बम यस्तो चीज जस्तो भएको छ कि मानौं यो सामान्य खेलौना हो ।
स्वभाविक रुपमा सत्ता पक्षले प्रहरीलाई उपयोग गरिरहेको हुन्छ । सरकारमा नभएको दल प्रहरीलाई धम्क्याउन नै व्यस्त हुन्छ । यो यसपटक मात्र होइन्, पटकपटक भइरहेका छन् । किनकी सत्तामा हुनु र नहुनुको फरक पनि यही हो । प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादीबाट बनेका गृह मन्त्री बनेका जनार्दन शर्मालाई बिनाविभागीय मन्त्रीमै सीमित गरेर गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी आफै सम्हालेपछि चुनावको मुखमा प्रतिपक्षी एमाले र अहिलेसम्म सरकारमै रहेको माओवादी आफै सशंकित छन् । सत्ता पक्ष प्रहरी-प्रशासनलाई आफ्नो पेवा ठान्छ । प्रतिपक्ष भने प्रहरीलाई चलाउन नसकेकोमा आक्रोश पोख्छ । यही चेपुवामा छ नेपालको प्रहरी-प्रशासन ।
झापाको दमकको चुनावी आमसभामा पूर्वगृहमन्त्री समेत रहिसकेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औँला ठड्याउँदै प्रहरीलाई चेतावनी दिँदै – ‘प्रहरीलाई हेक्का रहोस्, दुई महिनापछि यो देशमा बामपन्थी सरकार बन्दैछ, त्यही अनुसारको व्यवहार गर्नुहोला’ भनेर भाषण गर्नुभएको समाचार पढेपछि मलाई आजभन्दा तेइस वर्ष अगाडिको उहाँको गृहमन्त्रीको शुरुवातका घटनाहरु सजीव भएर मानसपटकमा आए । उहाँलाई नेपालका प्रहरीले सफल गृहमन्त्रीहरुमध्ये एक मान्छन् । उहाँको कार्य आरम्भ आफ्नो गृहनगर दमक इलाका प्रहरी प्रमुख (इन्स्पेक्टर) सरुवा गरेर नै सुरु भएको भनिन्छ ।
उच्च मनोबल भए बुथभित्र पड्किन लागेको बम टिपेर फाल्ने अनि दर्जनौँ ज्यान बचाउने बहादुर प्रहरी भएको संगठन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरुले अविश्वसनीय टिकाटिप्पणी गरिदिँदा प्रहरीको मनोबलमा प्रहार हुनसक्छ ।
त्यतिखेर पनि मध्यावधि निर्वाचनको लगत्तै उहाँ गृहमन्त्री बन्नुभएको केही दिनमै उहाँले पूर्वक्षेत्रको डिआईजी, दमकको इन्स्पेक्टर तत्कालै परिवर्तन गर्न आदेश दिँदा ‘कस्तो खाल’को लाई पठाउने भनेर सोधीखोजी भएको सन्दर्भ चर्चित थियो । अहिलेको निर्वाचन बिथोल्ने अभिप्रायले प्रत्येक दिन जसो बम पड्किरहेको सन्दर्भमा प्रहरीको मनोबल स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसमा पनि प्रतिपक्षको प्रमुख नेता पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तित्व र सम्भावना बोकेको नेताबाट प्रहरीमाथि नै सांकेतिक भाषणले कस्तो असर पार्ला ? यो टड्कारो प्रश्न त छँदैछ नै ।
अहिलेको तरल अवस्थामा जताततै बम, एम्बुस सजिलै पड्किएको समाचारले के देखाउँछ भने अहिलेको सुरक्षा व्यवस्था चुनौतिपूर्ण अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा प्रहरीको मनोबल खस्किन सक्ने सम्भावना छँदैछ । यस्तो सम्बेदनशील अवस्थामा प्रहरीको मनोबल थोरै खस्किन मात्रै गयो भने पनि त्यसले सम्पूर्ण निर्वाचन एवम् सुरक्षा व्यवस्थालाई नै असर पार्दछ । त्यसबीचमा पनि प्रहरी संगठन चारैतिरको प्रहार र आफूभित्रकै स्वस्थ अनि अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाबाट कता–कता थिलथियो त छदैँछ । यस्तो अवस्थामा यदि सुरक्षा व्यवस्था बलियो अनि सुव्यवस्थित गराउने हो भने त्यसको पहिलो शर्त नै प्रहरीको उच्च मनोवल हो । त्यसको लागि प्रहरीलाई विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । त्यो भनेको प्रहरीले स्वतन्त्र एवम् निर्भिक भएर काम गर्ने वातावरण हुनुपर्दछ । जुन राजनीतिक पार्टीहरुबाट मात्रै सम्भव छ । किनकी उनीहरुको सञ्जाल र पहुँच त्यहीस्तरमा सर्वत्र छैन् । साथै उनीहरुले जनमत सकारात्मकतातिरै सिर्जना गर्दै जाने गर्दछ । तर अहिलेको हाम्रो देशको राजनीतिक माहौल, सुरक्षा सम्वेदनशीलताप्रति बेखबरझैं देखिन्छ । अनि प्रहरीमाथि प्रश्नमाथि प्रश्न, दवाब अनि प्रभावका प्रहारहरु भइरहेको देखिन्छ ।
अहिले प्रहरीमाथि शंका, आशंका, प्रश्न उठ्ने क्रमलाई विचार गर्ने सन्दर्भमा करिव २३ वर्ष अगाडिको मध्यावधि निर्वाचनको चपेटामा मोरङको क्षेत्र नम्बर ७ मा सुरक्षा कमाण्डरको नाताले खटिइँदै गर्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका डिएसपीको आदेशको याद आउँछ । उहाँले कोशी होटलमा सयजना जति अपरिचित हरियारधारी आएर बसेको बताउनुभयो । र, मलाई तत्कालै पुगी यथार्थ बुझ्ने र प्रमाणित भए पक्राउ गर्ने आदेश दिनुभयो । हुँइकिएर हाम्रो टोली होटल पुग्दा कम्पाउण्डभरी टन्नै मसलदारहरुको भीड फेला परेको थियो । यता प्रमुख पार्टीहरु एकापसमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिरहेका थिए ।
‘भोलि हामी नै सरकारमा आउने हो, विचार गरौंला’ भन्ने सत्ता बाहिरका नेता या ‘विचार गर है हाम्रो सरकार छ नि’ भन्ने प्रवृत्तिले प्रहरी व्यवस्थापनले कहिल्यै यथास्थान पाउन सक्दैन ।
त्यो काठमाडौँबाट आएको खेलाडी टोलीलाई बिस्तारै हाम्रो टोलीले घेर्ने क्रममा उनीहरुको पनि जिज्ञासा हुन्छ – हामीलाई किन सोधखोज ? म नाजवाफ भएँ । म्यादी प्रहरीसहित १० जना प्रहरी लिएर १०० जना खेलाडीको टोलीसँग बहस गर्नु परेको परिस्थिति सम्झिँदा अहिले प्रहरीले कसरी व्यवस्थापन गरिरहेका हेलान भन्ने कौतुहलता हुन्छ । प्रहरीलाई दबाब दिने, यता र उता भन्ने आरोप लगाउँदै प्रहरीलाई यता न उता बनाउनेहरुले सोच्नै पर्ने कुरा – खस्किएको प्रहरीको मनोबलले सुरक्षा व्यवस्था हुँदैन, विनासुरक्षा व्यवस्था निर्वाचन हुन गाह्रो हुन्छ । तसर्थ, निर्वाचन चाहने राजनीतिक शक्तिहरुले प्रहरीप्रति विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्दछ । या त ‘भोलि हामी नै सरकारमा आउने हो, विचार गरौंला’ भन्ने सत्ता बाहिरका नेता या ‘विचार गर है हाम्रो सरकार छ नि’ भन्ने प्रवृत्तिले प्रहरी व्यवस्थापनले कहिल्यै यथास्थान पाउन सक्दैन ।
उच्च मनोबल भए बुथभित्र पड्किन लागेको बम टिपेर फाल्ने अनि दर्जनौँ ज्यान बचाउने बहादुर प्रहरी भएको संगठन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरुले अविश्वसनीय टिकाटिप्पणी गरिदिँदा प्रहरीको मनोबलमा प्रहार हुनसक्छ । यसरी कमजोर भएको प्रहरीले शान्तिपूर्ण अनि निर्भिक चुनाव गराउन सक्ला ? यो आफैमा अनुत्तरित प्रश्न भएर उभिन सक्छ । तसर्थ, दुई महिना पछि जो सरकारमा आएपनि प्रहरीभित्र त्यसको असर पर्नहुन्न । यति भए कुनैपनि पक्ष वा विपक्षीले ठूलो स्वरमा भनिरहनु पर्ने छैन कि अब हामी सरकारमा आउने हो भनेर । अनि प्रहरीले मुलधारमा हिँडेको राजनीतिक शक्तिसँग हैन कि मुलधार बाहिर रहेका शक्तिहरुसँग जुध्न सकोस्, तिनलाई एउटा साइजमा ल्याउन समर्थ होस् ।
लेखक पूर्वडिएसपी हुन् ।
श्रीमतीलाई माइत पठाएको झोँकमा बुवा र ठूलोबुवाको हत्या